Biden oo waqti u qabtay kordhinta qaxootiga galaya Mareykanka - Muraayad
Home Nolosha Biden oo waqti u qabtay kordhinta qaxootiga galaya Mareykanka
Biden oo waqti u qabtay kordhinta qaxootiga galaya Mareykanka
Madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden | Image Credit: Reuters
Madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden, ayaa kordhin doona tirada qaxootiga loo oggolaanayo inay tagaan Mareykanka.
Biden ayaa marka la gaaro 15-ka bisha May ee sanadkan saxiixi doona dikreeto uu ku fasaxayo in kumannaan qof oo dheeraad ah ay galaan dalkiisa, sida uu sheegay Aqalka Cad.
Arrintan ayaa timid kaddib markii dhaleeceyn xoog leh loo jeediyay maamulka Biden oo lagu eedeeyay inuu ka gaabiyay qaabilidda soo galootiga.
Afhayeenka Aqalka Cad, Jen Osaki, ayaa sheegtay in rabitaanka madaxweyne Biden uu ku doonayo inuu ku saxiixo sharci oggolaanaya in ay Mareykanka galaan 62,500 oo qaxooti ah kuwaasoo lagu qaabilayo miisaaniyad sanadeedka oo ku eg bisha September “uu u muuqdo mid aan suuragal ahayn” maadaama madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu maamulkiisa aad u adkeeyay soo galitaanka qaxootiga.
“Inta laga dhammeystirayo go’aankaas, madaxweynaha waxaa lagu boorriyay inuu si deg deg ah u burburiyo nidaamkii Trumo ee qaxootiga looga xannibay inay gobollo badan kasoo galaan iyo in la safaxo duullimaadyada gobolladaas,” ayay tidhi Psaki.
“Markii taas lagu guuleysto, waxaan rajeyneynaa in ugu dambeyn uu madaxweynaha kordhiyo tirada qaxootiga cusub ee lagu daboolayo miisaaniyad sanadeedka meeshi loo gaaro 15-ka bisha May,” ayay sii raacisay hadalkeeda.
Markii hore waxaa soo baxay warar ay shaaciyeen qaar ka mid ah warbaahinta oo sheegayay in sarkaal macagiisa qariyay uu fashilay in go’aankii Trump ee tirada qaxootiga ku koobayay 15,000 uu sii jiri doono.
Taas waxay ka dhigneyd in Biden uu ka baxay ballanqaadkii uu sameeyay ee ahaa in uu bisha February kordhiyo soo galootiga.
Hadalkaas wuxuu ka careysiiyay dad badan oo dhaleeceyn u jeediyay Biden, waxaana ka mid ah xildhibaanadda Congress-ka, Ilhaan Cumar, oo sheegtay inuu go’aankaas yahay “sharaf dil”.
“Waa mid si tops ah uga hor imaanaya moqwidkeenna wuxuuna halis galinayaa nolosha wiilasha iyo gabdhaha ku jira xeryaha qaxootiga ee daafaha adduunka.” ayay tidhi.
Previous articleFaa’iidooyinka u gaarka ah dadka barkin la’aanta seexda
Next article‘Reer Galbeedka ha mamnuucaan aflagaaddeynta Nabiga (NNKH)’